कसरी हटाउने धेरै सोच्ने बानी ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
वर्तमानलाई हेरेर भन्दा बढी हामी विगत र भविष्यलाई दिमाग राखेर बाँचिरहेका हुन्छौं । जसले गर्दा अनावश्यक सोचहरु जन्मिन्छन् र हामीले आफ्नो जीवनलाई जटिल बनाउन पुग्छौं ।
फुर्सदिलो हुँदा या दिमाग दाली भयो भने दिमागमा अनेक सोचहरु जन्मिन थाल्छन । त्यसैले आफूलाई काममा व्यस्त हुँदा दिमागमा सिर्जनात्मक सोच जन्मिन्छन् । जसले गर्दा अनावश्यक सोचहरुको लागि समय नै रहँदैन ।
हरेक कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ । आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको, जस्ताको तस्तै न त कुनै परिस्थिति हुन्छ, न त वस्तु या मान्छे नै । त्यसैले आफ्नो अगाडी आएको कुरालाई स्विकार्न सिक्नुपर्छ । वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ ।
व्यक्ति एक्लो हुँदा अनेक सोच दिमागमा आउँछन् । त्यसैले एक्लो बसिराख्नु हुँदैन । सकारात्मक सोच राख्ने साथीहरुको संगत गर्नुपर्छ । सामाजिक काम, समारोह आदि कार्यक्रममा सहभागी भइराख्नुपर्छ । मनोरंजनका साथै पुस्तकमा समय व्यतित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कुनै ठाउँमा बस्दा अनेक सोच आएका छन् भने ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमा बसिरहेको समयमा अनेक सोच आउन थाले भने घर बाहिर निस्कनुपर्छ । यसले गर्दा दिमाग ती सोचहरुबाट अन्यत्र मोडिन्छ ।
आफ्नो मात्र एकोहोरो सोच राख्ने, आफू मात्र सही छु भन्ने भावना ल्याउनु हुँदैन । अरु व्यक्तिको दृष्टिकोण पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कुनै कुराले सताएको छ भने अरु व्यक्तिको दृष्टिकोण अनुसार सुझाव लिनुपर्छ ।
दिमागमा धेरै कुरा खेल्न थाले भने आफ्नो रुचीको काम जस्तै, नाच्ने, चित्र बनाउने , लेख्ने , खेले, मीठो परिकार बनाउने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दिमागमा नयाँ उर्जा आउँछ र अनावश्यक सोच हराएर जान्छन् ।
शरीरमा कमजोरी महसुस भयो पनि दिमागमा नकारात्मक सोच आउन थाल्छन् । त्यसैले खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै योग, मेडिटेसन, शारीरिक अभ्यासले अनावश्यक सोच हटाउन मद्धत हुन्छ ।
आफ्नो कोठा सफा गर्ने, आफू सफा रहने गर्नुपर्छ । आफ्नो लुक्समा समय समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, जस्तै कपाल काट्ने, लुगा फरक लगाउने आदि । मुस्कुराएर बोल्ने, कसैलाई देख्दा मुस्कुराउने गर्नुपछृ । केही छिन हिड्ने, हरियाली भएको ठाउँमा बस्ने गर्नुपर्छ । यी कुरा सानो लागेतापनि ठूला परिवर्तन ल्याउँछन् ।
दिमाग बढाउन हटाउनुपर्ने सामान्य ६ ब्यबहार
जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग मजबुत हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहज तरिकाले लिन्छ । मानसिक रुपमा मजबुत रहन केही स्वस्थ ब्यबहार अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
आफ्नो ब्यबहार, भावना र बिचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने सफलता धेरै नजिक हुन्छ । निम्न बिचारहरु मानसिक रुपमा मजबुत मान्छेसँग हुँदैनन् । यदि हामीले पनि यस्ता बिचार हटाउन सक्यौं भने मानसिक रुपमा मजबुत भएर सफलता हासिल गर्न सक्छौं ।
गल्ती महशुस गर्ने, तनाव नलिने
गल्ती कसले गर्दैन ? जानेर पो गर्नहुँदैन । नजानेर हुने गल्तीका लागि धेरै मान्छे पछुताउछन् । तर, यो गलत बानी हो । एकचोटी भएको गल्तीलाई सम्झिरहँदा दिमाग क्षय हुन्छ । त्यसैले गल्ती नदोहो¥याउने बिचार लिएर भएको गल्तीमा नअल्झिने सोच बनाउनुपर्छ ।
धेरै मान्छेले जिन्दगीमा दोहो¥याउने गल्ती हो यो, अरुले ‘राम्रो’ भन्दा मख्ख पर्ने र ‘नराम्रो’ भनेपछि खिस्रिक्क हुने । यही गल्तीले मान्छेलाई पछारिरहेको हुन्छ । सधैँ अरुले हौसला प्रदान गर्देनन् र सबै आफ्ना अनुकल हुँदैनन् । अरुले खराब भनिदिँदा खराब महशुस गर्ने बानी त्याग्यो भने दिमाग बलियो बन्दै जान्छ ।
मान्छे ठिकठाक अवस्थामा छ भने ऊ परिवर्तनदेखि डराउँछ । परिस्थितिको परिबर्तन नयाँ अवसरको ढोका ठान्नेहरु मात्रै यो दुनियाँमा तेज बुद्धि भएकामध्य परेका छन् । सफलताको माथिल्लो सिढीमा उनीहरु नै पुगेका छन् ।
यस्ता मान्छेले परिवतृनलाई सधैँ स्वागत गर्छन् र समयसँगै आफूलाई बदल्छन् । त्यसैले परिवर्तनसँग डराउने होइन डटेर सामना गर्ने बिचारले बुद्धि बढाउँछ ।
एक्लोपन महशुस नगर्ने
धेरै मान्छे साथीसँग अधिकांस समय कटाउन रुचाउछन् । यो दिमाग क्षय गर्ने सबभन्दा ठूलो कारण हो । किनकि साथीहरुमाझ दिमागले नयाँ कुरा सोच्ने र एकोहोरिने अवसर पाउँदैन ।
बिस्तारै त्यसरी सोच्ने ग्रन्थी बन्द हूँदै जाँदा असफलता हात लाग्छ । त्यसैले एक्लोपनसँग डराउने होइन, त्यसको सदुपयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । आफ्नो खुशीका लागि साथीमा निर्भर नभइ एक्लै रमाउनु पनि सफलताका लागि कारक बन्न सक्छ ।
जल्ने होइन, आइडिया लिने
असाध्यै धेरैको सामूहिक रोग हो, अर्काको प्रगतीमा जल्ने । आफ्नो सफलता भन्दा अर्काको असफलतामा रम्ने बानीले अन्ततः मान्छेलाई त्यही रुपमा बदल्छ । दिमाग पनि आफ्नो सफलताका लागि भन्दा अर्काको असफलताका लागि चल्छ ।
आफू अघि बढ्ने समय अर्काको खुट्टा तान्न खर्चिदा कहिल्यै सफलता हासिल गनृ सकिदैन । बरु उससँग सफलताका आइडिया लिएर अघि बढ्दा सहयोग पुग्छ ।
अरुसँग तुलना नगरौं
आफ्नो तुलना कोही अर्काेसँग गर्नुहँदैन । किनकि जन्म नै फरक तरिकाले भएकाले कुनै कुरामा समानता हुने संभावना नै हुँदैन । आफूलाई अरुसँग राखेर हेर्दा जहिले पनि कमजोर महशुुस हुन्छ ।
आफूसँग उसको तुलना गरेर के छैन ? भनेर सोच्दा अभाव देखिन्छ । बरु आफूसँग भएको कुरालाई कसरी बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोचौँ । जसले गर्दा दिमागले सदा विकल्प दिइरहन्छ ।
पठनमा रमाउन त्यसतो विधि पढन्ते भइरहनु पर्दैन। तपाईं पठनमा रमाउन सक्नुभयो भने यसले कुनै विषयमा जनकार मात्र बनाउँदैन, गर्न आँटेका काममा पनि सहयोग पुर्याउँछ।पठनले हाम्रो सोचाई र चिन्तनलाई फराकिलो बनाउँछ। यो जानकारी आजको शुक्रबार साप्ताहिकले छापेको छ।हिजोआज अधिकांशको एउटै गुनासो हुन्छ, पढ्न त मन छ तर के गर्नु? फुर्सदै हुन्न।
साँच्चिकै हामीलाई पढ्न मन छ भने केही कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने पढ्नको लागि समय छैन भनिराख्नु पर्दैन। एकैचोटी धेरै पढ्न खोज्दा सकिँदैन। त्यसैले थोरैबाट सुरुवात गर्नुस्। पुस्तक पढ्ने बानी नभएकाले आज ५० पाना पढिसक्छु भनेर प्रतिवद्धता गर्न सकिन्छ।पढ्ने उद्देश्य आफैँले बनाउने हो। अरु कसैले भन्दैमा बानी बस्दैन।
सन् २००९ मा अमेरिकी एक विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले जसले अब यसरी पढ्छु भनेर साथीहरुमाझ योजना सुनाउँछ, कालान्तरमा उनीहरुले नपढ्ने देखिएको थियो।जतिसुकै मज्जाको पुस्तक भए पनि बीचमा पुगेपछि पढ्न अल्छी लाग्छ। तर, पिर नगर्नुस्, जे हुन्छ रामै्रका लागि हुन्छ।जे मन पर्छ त्यही पढ्ने बानीले पनि पढ्ने बानीको विकास हुन्छ।
जहाँ जाँदा पनि पुस्तक नछुटाउने, पढ्नको लागि समय छुट्याउने, पढ्ने कुरालाई चुनौतिका रुपमा लिने, पढ्ने वातावरण आफैँ सिर्जना गर्ने, पुस्तक आफैँ किन्ने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, पढ्ने कुरा धेरै छन् भन्ने सोच्ने, धेरै थरीका पुस्तक पढ्ने गर्दा पनि पढ्ने बानीको विकास हुन्छ।
Don't Miss it पखला लाग्दा के गर्ने पखाला रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? जानी राखौं
Up Next आँखामा औषधि कसरी हाल्ने ?
भुइँ मा बसेर खाना खादा हुन्छन यी फाइदाहरु
पहिले–पहिले, भन्सामा होस् वा कुनै सभा समारोहमा खाना भुईमा बसेर खाइन्थ्यो । तर, अब त्यो सबै डाइनिङ टेबलले प्रतिस्थापन गरिसकेको…
शरीर कमजोर भएजस्तो हुन्छ ? त्यसो हो भने यस्ता खानेकुरा खानुहोस् र मजबुत शरीर बनाउनुहोस्
स्वस्थ्य रहनु शरीरको स्वभाविक अवस्था हो । रोग, विकार, कष्ट, दुख वा दुर्बलता अस्वभाविक अवस्था हो । प्रकृति व्यवस्थाको उल्लंघनको…